Iyo M2 chip yaizouya kuMacBook Air ine ruvara nyowani Ndinobva mac
Iyo M2 chip yaizouya kuMacBook Air ine ruvara nyowani
Jordi Gimenez | 07/07/2021 10:00 | MacBook Air, Rumo
Zvinotaridza kuti kambani yeCupertino haina hurongwa hwekutanga iyo mapurosesa matsva eM2 eMacBooks uye runyerekupe rutsva rwakaburitswa na "Dylandkt" inoratidza kuti Apple ingadai iri kufunga nezvekutanga iyi chip nyowani ine yakavandudzwa MacBook Air maererano nemavara. Iyo dhizaini yaisazoshanduka yakawandisa kune iyo Nyowani mhepo asi yaizowedzera, sekuratidzwa neichi chakanatswa, nyowani Apple Silicon processor uye rumwe ruvara rutsva.
Mupfungwa iyi, tanga tichiona makuhwa kwemavhiki mashoma nezvekuuya kwepakati processor yezvikwata zve14 ne16-inch Pro, inonzi M1X kana chimwe chakadai, asi runyerekupe rwakatangwa nemushandisi uyu runoratidza kuti shanduko kwete kusvika kusvika hafu yekutanga gore rinouya, ne yakavandudzwa MacBook Air mukati nekunze.
Saka zvinoita sekunge tichagara pasina shanduko yeMacBook Pro iyo inogona kuvhura kubva kuApple gore risati rapera (tichigara tichiteerera aya makuhwa azvino) iri kuitika. Mune ino kesi, iyo tweet yakatangwa yakajeka, m2s matsva kwehafu yekutanga yegore rinouya uye nerudzi rutsva:
Ini ndaingoda kugovera rumwe ruzivo nezvekuti ndotarisira rinotevera chizvarwa M2 (kwete iyo M1X iyo yakachengeterwa Pro Mac zvishandiso). Iyi processor iri munzira yekuburitsa muhafu yekutanga ya2022 padivi peanouya mavara Macbook (Mhepo).
Mune ino kesi runyerekupe rwakatangwa nemushandisi Dylandkt harisi idzva zvachose uye nderekuti mavhiki mashoma apfuura anozivikanwa Jon Prosser, akataura zvakare kuti chizvarwa chinotevera MacBook Air ichave nekugadziriswazve kwakakwana, huwandu hwakasiyana mavara akafanana neatinogona kuona muMac nyowani uye chip2.
Dylandkt munguva pfupi yapfuura yakarova chiratidzo neakawanda Apple chigadzirwa zvigadzirwa. Kwekupedzisira Mbudzi 2020, Dylandkt akataura kuti chizvarwa chinotevera iPad Pro yaizosanganisira M1 chip. Iyi yaive mwedzi mishanu mudziyo usati waburitswa uye zvaive chaizvo. Isati yatanga iyo 24-inch iMac pakutanga kwegore rino, Dylandkt akafanotaura kuti iMac yaizogamuchira dhizaini nyowani uye kuti M1 yaizowedzera ...
Tichaona kana zviri izvo muchiitiko ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Iyo M2 chip yaizouya kuMacBook Air ine ruvara nyowani
Vatengesi veVietnam veApple vanomanikidza vashandi vavo kurara vakawandisa kuti varege kutapuriranwa
Ngwarira Phishing iyo inouya kubva kune chero webhu